Dankook University - Higher Education ná Mba Ọzọ na South Korea
Dankook University Nkọwa
tọrọ ntọala : 1947
Students (ihe ruru.) : 21000
Echefukwala atụle Dankook University
Idebanye aha na Dankook University
N'okpuru okobot mottos nke “National Salvation, Independence na Self Reliance,” nakwa dị ka ụkpụrụ nduzi nke “Eziokwu na Service,” Dankook University ka ikwesị ntụkwasị obi jee ya ọzọ nke ejiji eto eto talent na Ọrụ agụmakwụkwọ ọganihu.
na 1967, Dankook University e elu mahadum ọnọdụ. Na iwebata nke abụọ campus na Cheonan, DKU ghọrọ onye mbụ n'etiti Korea si mahadum nwere alaka campus. DKU anọgidewo ya phenomenal ibu na oghere nke ya eze na ụlọ ọgwụ dị na 1984 na izugbe ụlọ ọgwụ dị na 1994.
Mgbe 60 afọ nke mpako akụkọ ihe mere eme na Seoul, DKU relocated isi campus na- Jukjeon na 2007, ná mgbalị iji kwadebe onwe ya maka nnukwu itu ukwu anya na a zuru ụwa ọnụ afọ. Mgbe 30 afọ nke ewezugara nye mkpokọta, anyị dechara “An Unabridged Dictionary of Chinese Characters Ji Korean” – ndị fọdụrụ n'ezinụlọ na ihe ndị kasị zuru ezu nke ụdị. Na mgbakwunye, mgbe a ịga nke ọma 2010 -ekwe ha maka a Pharmaceutical College na Cheonan campus, anyị tọrọ ntọala siri ike maka ọkachamara na ndụ sayensị. The Cheonan campus LINC Project Group a họọrọ dị ka mba kasị pụta ìhè, na ọ na-e ekpede iche iche oru ngo n'okpuru ihe mgbaru ọsọ nke mwube iwu ga na-ụlọ ọrụ-mahadum imekọ ihe ọnụ. Ka ọ dịgodị, na Jukjeon campus ka lekwasịrị anya ya nnyocha na ego na Ozi Technology (IT) na Culture Technology (CT). Na-adịbeghị anya ịga nke ọma na ndị ọchịchị oru ngo, 'Arịa amamihe Education Project’ na 'cultivation Project maka mmalite-eduga Universities,’ na Jukjeon campus na-ewere a ọhụrụ itu ukwu anya na-etiti maka ụlọ ọrụ-mahadum imekọ ihe ọnụ na azụmahịa mmalite mmemme.
Anyị na nso nso kwubiri a oke nhazigharị anyị kọleji na administrative usoro dị ka akụkụ nke mgbalị anyị ka e meere Dankook University ọdịnihu dị ka otu onye nke ụwa-klas mahadum. Ọzọkwa, anyị wuru a top-nke-na-na akara ọrụ usoro na-emeju ahịa mkpa, ịkpa ọhụrụ mgbasa akuko na nkuzi ọdịnaya, na-emesi obi rụọ ọrụ nke ọma nnyocha na ochichi. Dabere na nchọpụta ndị a, DKU ka ike ya campuses na ulo oru a 'Dual Campus System’ malite na 2014, nke na-elekwasị anya iche iche.
N'okpuru ọkọlọtọ nke “Ịma aka na Creation,” ngalaba na mkpara nke Dankook University ga-eme ike ha mbo mbuli nke ịsọ mpi nke DKU na ibuli ọnọdụ nke Dankook brand. Biko bụ'abụ maka Dankook si “Ịma aka na Creation” dị ka anyị na-eme ihe itu ukwu bụrụ onye ndú nke a n'ọgbọ ọhụrụ.
President of Dankook University
The okobot nkà ihe ọmụma nke Dankook University - National Salvation, Independence na onwe-adabere - esite si onye ideals nke anyị founders Mr. Beomjeong, Chang Hyong na Mrs. Hyedang, n'ihi na Huijae ama-emezu nke onwe ha site na agba aghara na Korean akụkọ ihe mere eme. Ha n'onwe mwute nke mmadụ ịbụ na obodo ha n'okpuru Japanese ọchịchị na-emecha ha kwenyesiri ike na nnwere onwe nwere ike na-enweta site n'ịkụziri nkà na ịhụ mba n'anya ndị mmadụ n'otu n'otu. The abụọ founders ghọtara na ndị gụrụ akwụkwọ na-eji ike ha eme abụghị maka uru nke onwe ma maka mba ahụ n'ozuzu, chụpụrụ site a echiche nke mba amata na akụkọ ihe mere eme /-elekọta mmadụ eziokwu. N'ezie, ha we kwere na ọ bụ Dankook University oru zụọ ndị dị otú ahụ mmụta dị elu ndị mmadụ n'otu n'otu.
Na mgbakwunye na ndị dị otú ahụ n'echiche dị iche iche, Dankook University elekọtakwa eziokwu na ọrụ dị ka ya ụkpụrụ nduzi. Ọ bụ okwukwe ayi na nzube nke nnyocha na-amụ dị ma agafe nanị enweta ngwaọrụ maka ihe oriri - kacha nzube nke mmụta ka elu bụ inwetara ụmụ mmadụ ihe ọmụma na omenala. kachanụ, ọkà mmụta aghaghị ịdị na-alọghachi ihe ọmụma dị otú ọha mmadụ na-eme ka akụkọ ihe mere eme ọganihu. Ha ga-achọ ịzụlite nkọ, oké egwu uche na a ezi omume àgwà; site na ime otú ahụ na n'afọ ofufo na-ekere òkè betterment nke ọha mmadụ n'ozuzu, onye dunyere ụzọ Dankook chọrọ weputara. Ọ nọwo na-adịghị ada ada nraranye kwupụta ifiọkde dị otú ahụ ọrụ nke elu-akụziri na ịhụ mba n'anya na emewo ka Dankook University ịdị adị na ya ugbu a na ụdị.
College of Art na Kere
College of Management na Business
College of Engineering, na College of Architecture
Ntọala nke Dankook University e mma on November 1, 1947, ya oghere ebe ahụ Nakwon-Dong, Jongno-naa, Seoul, on November 3 nke otu afọ.
The mahadum na oru dabeere na ego onyinye nke oge Hyedang, Cho Huijae na mbụ chairperson Park Jeongsook, nakwa dị ka agụmakwụkwọ na nkà ihe ọmụma nke Beomjeong, chang Hyong. Na ntọala ya, mahadum nwere 960 ụmụ akwụkwọ, na abụọ ngalaba na ngalaba nke Iwu na atọ ngalaba na ngalaba nke Liberal Arts. Prọfesọ Chang Dobin e inaugurated dị ka ndị mbụ diin.
Ị chọrọ atụle Dankook University ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
Dankook University on Map
photos: Dankook University ukara Facebook
Dankook University reviews
Jikọọ na-atụle nke Dankook University.